လက်‌ဝှေ့ဆိုတာ သွေးကြောင်ရင် ဘေးရှောင်နေရမယ့် အားကစားပါ ဆိုတဲ့ ပေါ်တူဂီဖိုက်တာ ကယ်လာဒို - YOYARLAY Digital Media and News
” လက်‌ဝှေ့ဆိုတာ သွေးကြောင်ရင် ဘေးရှောင်နေရမယ့် အားကစားဖြစ်လို့ တကယ့်စစ်သည်တော်တွေနဲ့ပဲ ကိုက်တယ်”လို့ ဆိုလာသူကတော့ ပေါ်တူဂီဖိုက်တာ ဒီယိုဂိုကယ်လာဒိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မွေထိုင်းအကျော်အမော် ယော့ဆန်ကလိုင်းနဲ့ အကြိတ်အနယ် ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Enfusion ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ၊ WBC ဥရောပချန်ပီယံ၊ ISKA ဥရောပချန်ပီယံနဲ့ Strikers League ချန်ပီယံဘွဲ့တွေ ရရှိထားသူပါ။ ၃၉ ပွဲနိုင်၊ ၁၇ ပွဲရှုံးရလဒ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဒီယိုဂိုကယ်လာဒိုဟာ WLC ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ ထိုးသတ်မှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို ”အသင့်ပြင်ထားကြလို့” တပ်လှန့်လိုက်ပါပြီ။ ဒီယိုဂိုကယ်လာဒိုနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တာကို ရိုးရာလေး ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မေး – တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားလောကထဲ ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ
ဖြေ – ကျွန်တော်က ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ချင်ရမှန်းတော့ မသိဘူး။ ၇ နှစ်အရွယ်မှာ ကရာတေး စကစားတယ်။ ၁၄ နှစ်သားအရွယ်မှာ မွေထိုင်းပြောင်းကစားတယ်။ အဲဒီကတည်းက မွေထိုင်းပဲ ကစားလာတာပါ။
မေး – လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်တုန်းက မွေထိုင်းအကျော်ဒေးယျ ယော့ဆန်ကလိုင်းနဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်း နွှဲခဲ့သေးတယ်နော်။ မွေထိုင်းနဲ့ Strikers League မှာ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဘယ်လိုပုံဖော်ချင်လဲ။
ဖြေ – ယော့ဆန်ကလိုင်းနဲ့ပွဲက ကျွန်တော့်ကစားသမားဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ပွဲတွေကြည့်ပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့သူပါ။ တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားမှာ သူ့လိုဂန္ထဝင်မျိုးနဲ့ တန်းတူကစားနိုင်မယ့် အဆင့်မျိုးရောက်ဖို့လည်း အမြဲတမ်းဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ သူနဲ့ ထိုးသတ်ခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ အဲဒီပွဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်စွမ်းအတွက်လည်း အရမ်းပျော်ပါတယ်။ Strikers League ကလည်း ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ရပ်ပါ။ ၇၇ ကီလိုတန်းမှာ ချန်ပီယံဘွဲ့ရထားတယ်။ Strikers League မှာ ထိုးရတာကိုလည်း သဘောကျတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဖိုက်တာတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော့်မွေးရပ်မြေမှာ ထိုးခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ သူက UFC မှာ ထိုးနေတယ်။ (ကယ်လာဒို ရည်ညွှန်းသူမှာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံဖွားဖိုက်တာ ဘရက်ကွေ့ရစ်ဒယ်ဖြစ်သည်)
မေး – လက်ဝှေ့ထိုးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ဘာများလဲ
ဖြေ – ကျွန်တော်က စိန်ခေါ်မှုတွေကို သဘောကျတယ်။ ထိုးသတ်မှုပုံစံ မတူညီတဲ့ လက်ဝှေ့က စိန်ခေါ်မှုသစ်တစ်ရပ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်သူပါ။ ကျွန်တော်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်လို့ ဘယ်ပုံစံနဲ့မဆို ထိုးနိုင်ပါတယ်။
မေး – လက်ဝှေ့ကို ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ လူအများစုကတော့ ကမ္ဘာ့အကြမ်းတမ်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးအားကစားလို့ ပြောကြတယ်။
ဖြေ – လက်ဝှေ့က တကယ့်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့ အားကစားပါ။ သွေးကြောင်ရင် ဘေးရှောင်နေရမယ့် အားကစားပေါ့။ တကယ့်စစ်သည်တော်တွေနဲ့ပဲ ကိုက်တယ်။ လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျားရဲ့သတ္တိကို ပြပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ လက်ဝှေ့စည်းမျဉ်းနဲ့ထိုးသတ်ရမယ့် ဖိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် သတ္တိပြခွင့်ရလို့ ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
မေး – ခင်ဗျားရဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းသား အန်တိုနီယိုဖာရီယာက WLC လိုက်မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံနော်။ ခင်ဗျား လက်ဝှေ့ထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာ အဲဒီအချက်ကရော လွှမ်းမိုးမှုရှိလား။
ဖြေ – အန်တိုနီယိုက ကျွန်တော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ။ လက်ဝှေ့လောကမှာ သူ့ရဲ့‌အောင်မြင်မှုအတွက် ကျွန်တော် အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ အန်တိုနီယို လက်ဝှေ့ထိုးနေတာ တွေ့ရပြီး WLC ချန်ပီယံဖြစ်လာတာ မြင်ရတော့ ကျွန်တော်လည်း WLC ရဲ့ ချန်ပီယံခါးပတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ ဒုတိယမြောက် ပေါ်တူဂီဖိုက်တာဖြစ်လာဖို့ ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လာတာပေါ့။
မေး – ခင်ဗျားအကြိုက်ဆုံးလက်ဝှေ့သမားက ဘယ်သူလဲ။ ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲ
ဖြေ – အကြိုက်ဆုံးလက်ဝှေ့သမားကတော့ အန်တိုနီယိုဖာရီယာပါ။ သူက ကျောက်သားနဲ့ထုထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ သူ့ရဲ့နှလုံးရည်နဲ့ နိုင်ပွဲရလိုစိတ်က နောက်အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်နေပါပြီ။
မေး – လက်ဝှေ့ပွဲဦးထွက်အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။
ဖြေ – အရင်တုန်းက ပွဲထိုးဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့အတိုင်းပဲ ပြင်ဆင်မှာပါ။ လက်ဝှေ့ပွဲဦးထွက်ထိုးတဲ့နေ့မှာ ပိုကောင်းလာဖို့ အပြင်းထန်ဆုံးလေ့ကျင့်မယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်အဆင့်မှာရှိတဲ့ ဖိုက်တာမျိုးလဲဆိုတာ အားလုံးသိအောင် ပြသွားမယ်။
မေး – လက်ဝှေ့ပွဲဦးထွက်က ဘယ်တော့လောက် ထိုးဖြစ်မှာလဲ
ဖြေ – ဒါကတော့ သိချင်ရင် စောင့်ကြည့်ရမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ။
မေး – ခင်ဗျားက ၇၅ ကီလိုတန်းလို့ သတင်းကြားတယ်။ ဒါဆိုရင် WLC ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းပေါ့။ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာရှိတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို ဘယ်လိုသတင်းစကားပါးချင်လဲ။
ဖြေ – အသင့်ပြင်ထားကြတော့။ ခင်ဗျားတို့တွေ ကျွန်တော့်လို ဖိုက်တာမျိုးနဲ့ ထိုးဖူးမှာမဟုတ်ဘူး။
မေး – ခင်ဗျားက တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားလောကမှာ ဆုတွေအများကြီးရပြီးပြီ။ WLC မှာ လက်ဝှေ့ထိုးရတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်ဝိတ်တန်းမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ချင်တယ်။ ချန်ပီယံခါးပတ်ကို အိမ်ယူသွားဖို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားမှာပါ။
မေး – မြန်မာပရိသတ်တွေကို ဘယ်လိုသတင်းစကားပါးချင်လဲ။
ဖြေ – ခင်ဗျားတို့တွေ အကောင်းဆုံးလက်ဝှေ့ပွဲတွေကြည့်ရဖို့ ကျွန်တော် အပြင်းထန်ဆုံးလေ့ကျင့်သွားမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကြည့်ရကျိုးနပ်စေမယ့် လက်ဝှေ့ပွဲမျိုး ထိုးပြချင်ပါတယ်။
”Lethwei is not for the faint hearted”, Portugese fighter Diogo Calado said_
Portugese fighter Diogo Calado said Lethwei is not for the faint hearted. It’sasport for true warriors.
He has won Enfusion world champion, WBC European champion, ISKA European champion and Strikers League champion. He lostavery close fight against the legend Yodsanklai Fairtex. He hasarecord of 39 wins, 17 losses fight record and be involved in WLC middleweight class. He warned his opponents in this weight class “Be Ready” We want to convey our interview with him for Yoyarlay fans.
1- How to get into combat sports?
I always wanted to beafighter, I don’t know why but as long as I can remember that’s what I wanted to do. I started in Karate at 7, at 14 I changed to Muay Thai and never left.
2- You have fought the good fight with Muay Thai icon Yodsanklai Fairtex6years ago. How would you describe your experience in Muay Thai and Strikers League?
My fight with Yodsanklai changed my career. I grew up seeing him fight and always wanted to get to the highest level of fighting sport to at the same level as legends like him. It was an honour to fight and I’m really happy with the fight I did.
Strikers League isagreat event and hold the 77kg title. I loved to fight in Striker League because I fought in my hometown versusavery good fighter that’s now fighting in the UFC.
3- What is the main reason for you to become involved Lethwei?
I love challenges! Lethwei isanew challenge, inadifferent style of fighting and I really want to prove to myself that I’macomplete fighter that can fight in any style.
4- How you think Lethwei. Most described it is world most brutal combat sport.
I think Lethwei isareally hard sport and not for the faint hearted. It’sasport for true warriors. Just stepping in the ring to fight Lethwei shows your valour. I’m really happy to have the opportunity to show my valour asafighter fighting in this rules.
5- Your compatriot Antonio Faria is WLC Light Middleweight Champion. How does it influence your decision about to fight Lethwei?
António is good friend and I’m really proud for what’s he has achieved in this sport. Seeing António fight Lethwei and becoming WLC champion just motivates more to become the second portuguese fighter holding this organization title.
6- Who is your favorite Lethwei fighter and why?
António Faria! He’s made of stone and his heart and will to win are really on another level.
7- How do you prepare mental and physical to fight your Lethwei debut?
I’ll prepare like I do for every other fight. I’ll train as hard as I can to become the better I can be in the day of my debut and show everyone my level asafighter.
8- When will be your Lethwei debut?
That’sasecret you’ll have to wait to know.
9- I heard you are 75 kilogram that is Middleweight class in WLC. What is your message your opponents in this weightclass?
Be ready! You never fought anyone like me.
8- You already won many accolades in combat sports. What is your goal as Lethwei fighter in WLC?
I just want to be the champion on my category. I’ll do my best to have that belt in my home.
10 – What is your message to Myanmar fans?
I’ll train as hard as I can to give you the best fights possible. I just want to give you the show you deserve.
Previous Previous post: ကပ်ရောဂါအတွင်း အယ်ဇိုင်မား ရောဂါသည်ခင်ပွန်းကို တွေ့ခွင့်ရဖို့ ပန်းကန်ဆေးတဲ့အလုပ် လုပ်နေရသူ
Next Next post: အမီတာဘက်ချမ်းတို့မိသားစု COVID-19 ရောဂါကနေ ပြန်ကောင်းမွန်လာဖို့ ပရိသတ်တွေ ဆုတောင်းခဲ့ကြ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ယူအက်စ်အိုးပင်းပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲမှာ စပိန်တင်းနစ်သမား ရာဖေးလ်နာဒယ်က ရုရှားတင်းနစ်သမား ဒန်နီမက်ဗီဒက်ကို အနိုင်ယူပြီး သူ့အတွက် (၁၉)ကြိမ်မြောက် ဂရန်းစလင်းဆုဖလား ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ ယူအက်စ်အိုးပင်းပြိုင်ပွဲ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခုပွဲစဉ်ဟာ (၄)နာရီ၊ မိနစ်(၅၀)ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်…
သိမ်ဖြူရုံကြီးပုံစံပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်ရအောင်စီစဉ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ WLC ဒုဥက္ကဋ္ဌ Camera&Edit- Cherry Post Views: 2,776